Ibex vs Eurostoxx: ndeipi index yandasarudza? | Ehupfumi Zvemari
Ibex vs Eurostoxx: ndeipi index yandasarudza?
Imwe yedambudziko rekuti zviuru nezviuru zvevashambadzi vadiki vane izvozvi ndosaka index index kuti isarudze panguva ino. Pamwe nesarudzo yenyika, iyo Ibex 35 kana, zvichikundikana izvo, nevamiriri vemusika weEuropean stock, iyo Eurostoxx 50. Kusvika padanho rekuti kazhinji kusanzwisisa kunoiswa mumaonero evasevha. Kunyangwe musimboti aya mairi indices akakosha emari inoshanduka yemari ye nzvimbo imwechete yehupfumi mukati mekondinendi yekare. Chokwadi ichi chaifanirwa kuve chisarudzo kuitira kuti shanduko yavo mumisika yezvemari yakanga yakafanana chaizvo.
Chero zvazvingaitika, zvichave zvakakosha kuti iwe utarise chero musiyano mudiki pakati pemasaga maviri aya. Vanogona kunge vakatora danho remagumo iwe sarudza imwe kana imwe musika. Kunyangwe iwo mutsauko havazovi mune chero zvipi zvingave zvakanyanya kana zvechisimba, sekunge kuti yaive misika kune rimwe divi reAtlantic, Asia kana imwe nzvimbo iri kure kana yekunze. Saka kuti iwe une zano zvishoma zvakatsanangurwa kubva zvino zvichienda mberi, isu tinokubatsira iwe kuti uzive chimwe chinhu nezve izvi zvemari nzvimbo zuva rega rega mamirioni mazhinji mazita anochinjana.
Pamwechete, hapana kana imwe iri nani kana yakaipa musimboti. Pasina zvichienderana neinertia yeimwe neimwe yemisika yemari. Kunyangwe iyo yakajairwa mamiriro ehupfumi hwese uye makuru ehupfumi paramende ichave yakakosha kwazvo. Kunyangwe paine chinhu chimwe chechokwadi chaunogona kuendesa uye icho chiri icho chakanyanya mu mitengo yavo inodzorwa kwazvo. Zvese mune imwe pfungwa uye imwe, sezvazviri pachena mumakore achangopfuura. Hazvishamisi kuti ivo vave maviri akanyanya kushandurana pasi rose.
1 Ndinofanira kupinda muEurostoxx here?
2 Shanduko yemaviri indices
3 Mamiriro ezvinhu
4 Ungatengesa sei nezviratidzo izvi?
5 Chii chiri nani izvozvi?
Ndinofanira kupinda muEurostoxx here?
Iyo yakasarudzika indekisi yekondinendi yakare inosangana pamwechete chikamu chakanaka chemakambani akakosha eSpain ayo akanyorwa pamari. Pakati pavo, uye zvingava sei neimwe nzira, iyo machipisi ebhuruu: BBVA, Iberdrola, Banco Santander, Endesa kana Repsol. Semhedzisiro yemamiriro ezvinhu aya, pane chokwadi chinonyanya kushamisa chekuti iwe unogona kuisa mari yako mukuchengetedza mune chero eayo mairi misika yezvemari uko migove yavo yakanyorwa. Kunyangwe mune chero zvodii, zvichagara zvichinyanya kubatsira kuti usarudze index yenyika inosarudza. Kupfuura chero chinhu nekuti chinopa makwikwi emakomisheni. Nemitero iri pazasi peiyo yeEurope uye izvo zvinokubatsira iwe kugadzira mari yakawanda nguva yega yega paunovhura kana kuvhara nzvimbo mune chero chengetedzo yayo yemari.
Kubva pane ino maonero, iwe unenge usina kusahadzika kwaungaenda kunodyara mumari. Ehe saizvozvo, asi kune zvimwewo zvinhu zvinozove zvakakosha kwazvo kwauri kuti iwe uite yako yekupedzisira sarudzo. Iwe haugone kukanganwa kuti iyo Eurostoxx 50 yakanyorwa pane inonyanya kukosha masitoko pane kondinendi yeEurope. Kusvika padanho rekuti iwe uchaona kushanduka kwayo, kungave pane kumusoro kana kuderera. Asi na kwete zvakanyanya kutsauka, kwete neimwe pfungwa kana imwe. Chero zvazvingaitika, ivo ndevamwe vevachavhoterwa kuti vagamuchire mari yako uye yemakore mashoma anotevera.
Shanduko yemaviri indices
Chekutanga pane zvese, iwe unenge uchishamisika kuti ndeupi wemisika ari kuzvibata panguva ino chaiyo. Zvakanaka, veSpanish vakasarudzika yaive yakanakisa indekisi yeEurope mukati mekota yekutanga yegore. Vashambadzi vadiki nepakati vanoita kunge vadzosera chivimbo chavo kumusika uyu. Muchokwadi, kusvika parizvino gore rino, iyo Ibex 35 yakayemurwa nepadiki pane gumi. Zvinenge zvakapetwa zvakapetwa zviviri zvemakondinendi equities, ayo akura neanosvika mashanu% panguva ino. Kubva pane ongororo iyi zvinoita sekunge chinhu chinonyanya kukurudzira kuisa mari mumusika weSpanish wemusika.
Asi haisi sarudzo iri nyore yakadaro yaunofanirwa kutora kubva zvino zvichienda mberi. Icho chikonzero ndechekuti hunhu hweSpanish bhangi chikamu chichava chakanyanya kukosha. Nekuti iwe haugone kukanganwa kunoshamisa kutsamira kwainayo pamari huremu hwemapoka emari. Zvakawanda kupfuura muEurostoxx 50, iyo inozivikanwa nekuve yakadzikama maererano nenhengo dzayo masheya indices. Chero zvazviri, chichava chinhu chekutora mukufunga kune inogara iri yakaoma nyika mari.
Nekuti zvirokwazvo, iyo Eurostoxx 50 haina kusununguka yemapoka makuru emari kana. Kunyangwe pane zvinopesana, yakanakira kusvika padiki pane iyo yenyika inosarudza. Asi iwe unofanirwa kuziva kuti yaive makore mazhinji akanonoka mukutora kwemitengo yayo. Inogona kunge iri diki diki iyo inogona kukwirisa iyo bharanzi kune imwe kana imwe equity index. Iko yako technical chinhu Chichava chimwe chinhu chekuti iwe utarise kubva ikozvino.
Zvisinei nezvose, zvichave zvakare zvakakosha kuti nzvimbo mbiri dzenyika dzisangane kunyudzwa mune uptrend. Kwete yakanyanyisa kukwira, asi nekukwira pakupera kwezuva. Iko kwavanogona kuyedza kutora mazinga matsva akakwirira mumutengo wavo. Mubvunzo uchave wekuti iwe unogona kukunda kwake kunotevera kuramba. Mune zvimwe zviitiko, zvirokwazvo kwete pasina kumwe kunetseka nekuda kwematambudziko ezvematongerwo enyika anokanganisa humwe hupfumi hukuru hwenzvimbo ye euro.
Iko kukweretesa kwemitero pahupfumi hweEurope ichafanirwa kuongororwa. Izvo zvakakosha kana European Central Bank ikafunga chinja zano remari uye sarudza mukati megore rino kuzviisa. Simba rayo rinenge richidarika danho kuitira kuti rikwanise kuenderera pamwe nekukwira kumusoro kwemwedzi ichangopfuura. Ose ari maviri uye mune imwe equity indekisi. Kusvika pakuti
Mupfungwa iyi, kunyangwe zvese zviri zviviri zvakabatana nezvisarudzo zveEuropean bank yekuburitsa, iyo kondinendi indekisi inotonyanya kutambira kune ese mvumo. Iine ingangoita chaiyo-nguva fananidzo yezvinhu zvese zvinoitika kumahofisi emahofisi ezvemari. Hazvishamise kuti inogona kuoneka seyekutaura mumhizha yequity. Nepo iyo Ibex 35 mune dzakawanda zviitiko zvazvinoita inoperekedza maitiro echiratidzo ichi chemasheya. Nekukosha kwakabatana pakati pezviviri uye kuti nguva zhinji mitengo yavo inoramba iri pamatanho mamwechete ekumuka kana kudonha.
Ungatengesa sei nezviratidzo izvi?
Kutora zvinzvimbo mune izvi equices indices zviri pachena zviri nyore uye hazvipe chero matambudziko ekuzviita kubva kubhangi rako rekare. Zvimwe kubva kubhangi bazi kana kubva pakombuta kana kunyange piritsi kana nharembozha. Ivo vanongoda iwe kuti uve mutengi webazi rezvemari, hapana chimwezve. Iwo mashoma mashandiro ekuvandudza ayo anongopesana mumitero yavo yekomisheni. Nekuti zvazviri, kushanda nemisika yenyika kunogara kuchipa pane kusiya miganhu yedu. Icho chimwe chebatsiro rekusarudza iyi mhando yemari
Iine zvizere zvakafanana mamakanika muzviitiko zvese izvi, pasina mutsauko. Iwe unongofanirwa kusarudza kuti ndeupi musika iwe waunofarira kuti kuchengetedza kwacho kubatsire. Hapana chimwe. Iyi sarudzo inogona kuve yakavakirwa pane iyo poindi maitiro mune izvo zviratidzo zvinonyudzwa. Mune zvimwe zviitiko iwe unogona kuve wakasarudzika sarudzo uye mune vamwe vaunokwikwidza navo mumisika yemari. Mune zvese zvikumbiro, iwe uchave uine rakasarudzika boka remakambani ayo anozogona kugutsa chako kudiwa kuti upinde uye ubude mumisika yemari iyi.
Chii chiri nani izvozvi?
Ehezve, parizvino hunyanzvi hweIbex 35 hunoratidzira kupfuura hwechiratidzo cheEuropean equity. Kunyangwe iwo mamiriro akafanana haagare achiitika, kure nazvo. Nekuti chero nguva inogona kuchinja, yakaipa pasina kufamba kwakasimba kana kukatanurwa pakati pechiratidzo chimwe chemari inoshanduka uye imwe. Kupi Kushaya mari ndechimwe chezvinhu zvakajairika kuita kubva kumisika yese yemari. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kupinda nekubuda munzvimbo dzavo chero nguva, pasina matambudziko.
Izvo zvinonyanya kucherechedzwa kuti misika yese iri pachena kune yehupfumi chokwadi munzvimbo yeyuro. Uye zvechokwadi, euro iri parutivi nemari huru dzepasi rose. Sezvo muchikamu zvinoitika nemamwe epasi rese misika yemasheya yakakosha kukosha. Nekudaro, iyo Eurostoxx ine chikuru chirevo mumisika yemasheya epasi kupfuura chiratidzo chedu. Nezvikonzero munhu wese achanzwisisa uye izvo zvinoita imwe yemabenchmarks eEquity equities.
Parizvino, kukosha kweIbex 35 kunonyanya kukwezva. Uine kukoshesa kwakakwirira kugona. Asi chenjera kwazvo, nekuti izvi zvinangwa zvinogona kupera chero nguva. Neshanduko mune zvinotarisirwa zvemasaga kwemakore anotevera. Kunyanya nekuda kwemamiriro ekugumbuka ari kusangana nedzimwe nyika dzeEuropean Union mune zvematongerwo enyika. Kunyanya, zvese zvakakomberedza France uye mukana wekuti inogona kubuda mueuro.
Zvisinei, sarudzo yekusarudza imwe kana imwe chiratidzo che stock ichave newe. Hakuna mumwe munhu, kunyangwe ichifanira kuve chakavakirwa pazvinangwa zvinhu zvinokubatsira kugadzirisa mashandiro. Uine chinangwa chakanyatso tsanangurwa uye icho hachisi chimwe kunze kwekutora zvakawanda kubva pamamiriro ako semudyari mudiki nepakati. Izvo zviri kumagumo kwezvazviri, sezvo iwe uchizonyatso kuziva kuburikidza neyako makore mazhinji echiitiko mumisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ibex vs Eurostoxx: ndeipi index yandasarudza?
Juan | mari akadaro
Ini pachangu, ndainzwa kudzikama kana ndiri muEurostoxx, sezvo iri boka rakati simbei. Kunyangwe zvisingaite kunge vatungamiriri vanotevera muEurozone muNetherlands neFrance, vanozokanganisa nyaya iyi. Uye ivo vari kuzoona shanduko muhupfumi, sezvavakanzwikwa mukutaura kwezvematongerwo enyika kwevatungamiri vaviri.
Pindura Juan | mari
Remy wizink akadaro
Ini ndinofunga kushamisika kwehupfumi kuri kuuya kubva kunyika dzeScandinavia, uye kwete kuti ive nani ... iro gutsaruzhinji rusununguko harugone kumira.
Pindura Remy Wizink
Chii chekuita kana iwe ukahwina rotari?
Maitiro ekudyara: kuchinjisa pakati pemari